नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा कसलाई के जिम्मेवारी ? - pnpkhabar.com
You are at:Home»समाचार»नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा कसलाई के जिम्मेवारी ?
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा कसलाई के जिम्मेवारी ?
By सन्दीप खत्री on ३ जेष्ठ २०७५, बिहीबार १०:२६ समाचार
काठमाडौं, जेठ ३: नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले नयाँ पार्टी सञ्चालनका लागि नौ सदस्यीय सचिवालय बनेको छ । यसअघि दुई पार्टीका नेता सम्मिलित एकता संयोजन समितिका आठ जना र एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेललाई थपेर नौ सदस्यीय सचिवालय गठन गर्ने निर्णय बालुवाटारमा बसेको एकता संयोजन समितिको बैठकले गरेको हो ।
एकता संयोजन समितिले दुवै पार्टीबाट एकताका लागि भएका निर्णयलाई पनि अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ ।